रविले पक्रिए भुतलाई, सम्पूर्ण नाटकको पर्दाफास, को हो त्यो भुत बनेर तर्साउने ? (भिडियो सहित) « Naya Bato
रविले पक्रिए भुतलाई, सम्पूर्ण नाटकको पर्दाफास, को हो त्यो भुत बनेर तर्साउने ? (भिडियो सहित)
यसरी रचिएको थियो भूतको नाटक रविले पक्रिए भुतलाई, को हो त्यो भुत बनेर तर्साउने ? सम्पूर्ण कुराको पर्दाफास हेर्नुहोस भिडियो र सबैले सेयर गर्नुहोस !
खबर त यस्तो आएको छ कि पैसामा कुरा मिलेपछि स्वय जन्म दिने आमाले पनि बोलीनन् रे । मलाई विश्वास छैन । नौ महिना कोखमा राखे र दश धारा दुध पिलाएर, दश नंग्रा खियाएर कयौं रात जाग्राम बसेर, जीन्दगीसँग सिँघौरी खेलेर, मुटुमा टाँसेको छोरीको बलत्कारको घटना गुपचुप राख्न आफ्नै आमाले मञ्जुरीनामा दिन सक्छिन ?
छोरीलाई लिएर तपाई हाम्रो कार्याल्य आउने दिन कुरेर बस्ने छौँ । हत्यारा, बलत्कारी, भष्ट्रचारी, केटी बेच्ने दलालहरु खुल्ला रुपमा हिडेको सुहाएन ।
रविले पक्रिए भुतलाई, सम्पूर्ण नाटकको पर्दाफास, को हो त्यो भुत बनेर तर्साउने ? हेर्नुहोस भिडियोमा: